Archives des Mandoto - Midi Madagasikara
Mandoto : Rava ny “bande des 10”, mbola karohina ny mpanao ody gasy
Redaction Midi Madagasikara 15 janvier 2014 bande des 10, karohina, Mandoto, mpanao ody, Rava
Natolotra ny fampanoavana omaly talata ireo « bandes des 10 » voasambotra tao Ankazomiriotra. Isan’ireo jiolahy nampihorohoro tamin’iny faritra iny mihitsy izy folo lahy ireto raha ny fampintam-baovao avy tamin’ny borigady Ankazomiriotra sy ny kaompania Mandoto. Misy andiany maromaro ireo jiolahy amin’izany ka ireto aloha no voasambotra hatreto. Marihina fa dimy no tratra voalohany tamin’izy folo lahy…
Mandoto : Mpanao gazety vahiny niharan-doza
Redaction Midi Madagasikara 2 janvier 2014 Mandoto, Mpanao gazety, niharan-doza
Ny 31 desambra lasa teo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina dia nitrangana lozam-pifamoivoizana tamin’ny làlam-pirenena faha-34, mankany Morondava iny. Tao Mandoto no niseho ny loza teo amin’ny PK 100+400. Vokatry ny torimasofotsy nahazo ny mpamily no nahatonga izany, ka nivoaka ny làlana ny fiara ary nilatsaka tany anaty hantsana. Fiara Hyundai izy…